Dharka hoose wear Dharka shaqada • farshaxanimada kumbuyuutarka ee P&M
Dharka dharka kuleylka leh waxay u heellan tahay inta badan dadka u nugul xaaladaha dibadda ee adag, sida heerkulka hoose, dabaysha ama qabyooyinka. Noocyada dukaanka badankood waa nigisyada kuleylka kuleylka leh: funaanado, funaanado iyo noocyo. Dharka dharka kuleylka leh ayaa loo sameeyay si waafaqsan heerarka ku habboon.
Dharka qaabkan loo qaabeeyey waxay hubisaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo wanaagga. Thanks to qaababkan, waxaa loo isticmaalaa oo kaliya shaqada, laakiin sidoo kale kuwa jecel cayaaraha jiilaalka. Intaas waxaa sii dheer, badeecadaha aan soo bandhigno waxaa lagu heli karaa qiimo tartan sababtoo ah tirada aan ku dalbanayno dukaankeenna. Isku darka tayada sare iyo qiimaha soo jiidashada leh ayaa ka dhigaya nigiska noocan oo kale ah mid caan ah oo kaliya ma aha oo kaliya xirfadleyaasha laakiin sidoo kale baahiyaha gaarka loo leeyahay.
Nigis Thermoactive oo si fiican ugu habboon jirka
Dharka dharka kuleylka kuleylka leh, oo ah xirmo hoosaadyo iyo surwaal
Dharka labiska waa mid aad u jilicsan, oo si fiican ugu habboon sawirka. Qalabkeedu waa mid raaxo leh in muddo gaaban ka dib markii aad xidhnayd, aad joojiso dareemiddiisa. Qalabka jilicsan ayaa dammaanad qaadaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa, ka hortagga cabsi kasta oo raaxo leh. Si kastaba ha noqotee, hawsha ugu weyn ee nigiska noocaas ahi waa in laga ilaaliyo caafimaadka iyo jidhka ka hortagga heerkulka hooseeya iyo qaboojinta jidhka.
Dharka dharka lagu dhejiyo ee Thermoactive ayaa si dhakhso leh uga helay taageerayaasheeda kuwa jecel cayaaraha iyo ganacsatada, hantidiisa si wanaagsan ayaa loo helay, taas oo kordhinaysa caannimadeeda. Lagu daro dharka kale sida sweatshirts, surwaal lub jaakadaha waxay kuu ogolaaneysaa inaad nidaamiso heerkulka jirka xaaladaha isbeddelaya.
Dhar madow oo heerkulka ka shaqeeya. PLN 38,69 guud ahaan
Ka saarida qoyaanka wax ku oolka ah
Dharka dharka kuleylka leh loogu talagalay iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyaddii ugu dambeysay. Iyaga ayaa inta badan mas'uul ka ah raaxada xirashada gaarka ah. Waad ku mahadsan tahay ka saarista qoyaanka lakabyada kore, waxay ku habboon tahay xaaladaha ay isticmaaleyaashu muujinayaan dhaqdhaqaaq jireed oo kordhay.
Qoyaanka waxaa loo daadiyaa lakabyada kore, taas oo muhiimad weyn leh haddii ay dhacdo jimicsi xoog leh. Wareegga saxda ah ee qoyaanka ayaa yaraynaya halista ur xun.
Ku ilaalinta nadaafadda dharka linenka ah waa mid aad u fudud, uma baahna habab gaar ah ama wakiilo nadaafadeed oo u gooni ah, kaliya raac shuruucda fudud ee ku qoran calaamadda alaabta ee ku saabsan xaaladaha dhaqidda.
Dharka dharka kuleylka leh, surwaalka Brubeck
nigiska shaqeeya raggadharka wanaagsannigiska shaqada haweenkadharka shaqada kululnigis shaqeeya thermoactivelinenka shaqada diirannigiska dharka shaqada kuleylka leh